sano 2 3 bilood ka hor #365 by Mathew3120
Waxaan rabay in aan waydiiyo su'aasha ku saabsan rakibayaasha, markaad ku cusbooneysiiso rakibayaashaada for the addons.Will rakaabiyayaashii hore waxay awoodi karaan inay soo dejiyaan addons ama ma waxaan ku qasbanahay inaan soo dejiyo addon mar kale la rakibay cusub.
Ku mahadsan tahay in aad heshay: 23
sano 2 3 bilood ka hor #366 by rikoooo
Hello Hello Mathew,
Waa inaad soo dejisid addon mar labaad, rakibayaal cusub ayaa diyaar u ah ugu dambeyn P3D iyo FSX Steam, ka bilaw nidaamka 10.
sano 2 3 bilood ka hor #374 by rufgar
Hambalyo. Waxaan dhawaan soo dejiyey pc-9 oo ka soo dukaameysigaaga iyo diiwaanka caadiga ah ee ku yaala waxay ku kooban tahay fsx iyo fsx-steam. Waan la soo koobay oo waxaan ku dhajiyay fsx-steam oo si fiican ayuu u shaqeeyaa marka laga reebo qiyaasta. Miyuu jiraa boogaan ama ma inaan dib u soo dejiyaa? Thanks.
sano 2 3 bilood ka hor #376 by Gh0stRider203
Rufgar ayaa qoray: Hi. Waxaan dhawaan soo dejiyey pc-9 oo ka soo dukaameysigaaga iyo diiwaanka caadiga ah ee ku yaala waxay ku kooban tahay fsx iyo fsx-steam. Waan la soo koobay oo waxaan ku dhajiyay fsx-steam oo si fiican ayuu u shaqeeyaa marka laga reebo qiyaasta. Miyuu jiraa boogaan ama ma inaan dib u soo dejiyaa? Thanks.
sidaa daraadeed qiyaasaha ma rakibin, waa waxa aad dhahaysid? Kaliya hubso inaanu ku tiirsanahay isla bogga intaanan bilaabin soo jeedinta walxaha
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: rufgar
sano 2 3 bilood ka hor #377 by rufgar
Haa dhejiyayaashu ma jiraan, laakiin muraayaduhu ma shaqeeyaan.
sano 2 3 bilood ka hor #378 by Gh0stRider203
si fiican, inta aan ka shaqeynayo Gold Edition, laga bilaabo waxa aan fahamsanahay inta uu ku xiran yahay buug kale oo ka duwan Bukaanka, MY Understanding waa in ONCE aad ku tagto liiska FSX ee feerada, wax walboo isku mid ah (FADLAN sax ah aniga haddii aan ' m khalad).
Waa inaad awood u yeelatid inaad ku rakibtid sida caadiga ah, ka dibna wax walba u gudbi fariimaha saxda ah. Waxaan maleynayaa in tani ay tahay waxaad samaysay?
Waa inaad cafisid Me meaan aan marnaba isticmaalin Steam Edition Edition lol GOD wuxuu ogyahay HADDII mar waliba waa inaan helaa, waxaa jiri doonta xanuunka ROYAL ee ah asem aad ogtahay waxa la leh dhamaan ... Ahhh stuff I have lmao Waxaan u jeedaa ... Mashruuca FSX waa kaliya gumaysiga xermiska 67.2 .... lol
sano 2 3 bilood ka hor #379 by rufgar
Si toos ah uma rakibi kartid fsx-steam. Waa in laga koobiyaa fsx. Taas macnaheedu waa in qormo qeexin gaar ah loo abuuro si ay u shaqeeyaan. Mid ka mid ah muraayadahayga fsx ayaa ka shaqeynaya qolofta.
sano 2 3 bilood ka hor #380 by rufgar
sano 2 3 bilood ka hor #381 by Gh0stRider203
JAWAABTA (ugu yaraan naqshad) waa farta lagu garto foormamka shaashadda ....
Lemme waxay qabtaan qaar ka mid ah asxaabtooda, laga yaabee inay ka caawin karaan inaan ka wanaagsanaado
sano 2 3 bilood ka hor #382 by rufgar
Waad ku mahadsan tahay saaxiibkii aad loo mahadceliyay
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.269